လန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့ မျက်ဝန်းတစုံကို ပြန်လည်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် C-Tango Multivitamin Eye Cream! | CosmeticMyanmar
Home » Article » လန်းဆန်းတက်ကြွတဲ့ မျက်ဝန်းတစုံကို ပြန်လည်ဖန်တီးပေးနိုင်မယ့် C-Tango Multivitamin Eye Cream!
မျက်ဝန်းတဝိုက်မှာပြန်လည်စိုပြေပြီး တင်းရင်းတဲ့အသားအရေမျိုးပိုင်ဆိုင်နေစေဖို့ရန်အတွက် C-Tango Multivitamin Eye Cream ကို Drunk elephant ကနေပြီး မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီ Eye Cream ဟာ မျက်ဝန်းတဝိုက်ရှိအသားအရေကို ပြန်လည်နိုးကြားစေပြီး ချောမွတ်တဲ့ မျက်ဝန်းတစုံကို ပြန်လည်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ 5C vitamin Complex ဟာ မျက်ဝန်းတဝိုက်ရှိအသားအရေကို ကြည်လင်စေပြီး မျက်ဝန်းတဝိုက်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အသားအရောင် မညီညာခြင်းများကိုလည်း ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ နေရောင်ခြည်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကြောင့်ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အပြစ်အနာအဆာတွေကို တွန်းလှန်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အရေးအကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာမှုများကို ဟန့်တားစေနိုင်ရန်အတွက် 8 peptide, cucumber, Superoxide dismutase, Hesperidin methyl chalcone, Ubiquinone ( Q10 ) တို့ကို ထည့်သွင်းဖော်စပ်ထားပါတယ်။ အသားအရေကို ပြန်လည်ကျန်းမာလာစေရန် ဗီတာမင် အီးလည်း ပါဝင်တာကြောင့် မျက်ဝန်းတဝိုက် အရေးအကြောင်းတွေအတွက် စိုးရိမ်စရာလုံးဝမလိုတော့ဘူးပေါ့။
“It’s not often that I’m instantly smitten withaskincare product, but when I am it’s usually from @drunkelephant 👏🏼 I’ve already gottenafew uses out of the new #CTango Multivitamin Eye Cream and I notice visible results after every use. The gel cream adds instant luminosity (dark circles, who?) and after it quickly sinks in I can feel it firming my undereye area without leaving it tight or dry—in fact, they feel more hydrated. I also have texture under there and it smooths over it and STAYS smooth until I reapply again. This might be my perfect day and night eye cream, especially under makeup 💃🏼” – @alyssajuliannebeauty #drunkinlove
A post shared by Drunk Elephant (@drunkelephant) on Mar 15, 2018 at 12:29pm PDT
အသက် ၂၅ မှ ၅၅ နှစ်အတွင်း အသုံးပြုပြီး ရလဒ်များအနေနဲ့ မျက်ဝန်းတဝိုက်မှာ ရာနှုန်းပြည့် ရေဓာတ်ပြည့်ဝလာပြီး ချောမွေ့လာပါတယ်။ မျက်ဝန်းလေးဟာ သာမန်နဲ့မတူဘဲ ပြန်လည်အားဖြည့်လာပြီး တင်းရင်းလာတာကိုလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။ မျက်ကွင်းညိုတာတွေလည်း တဖြည်းဖြည်းသက်သာမှေးမှိန်လာပါတယ်ဆိုပြီး Review များကို ရရှိထားတဲ့ Product လေးဖြစ်ပါတယ်။
“So excited to try the #CTango Multivitamin Eye Cream from @drunkelephant. Has antioxidants, peptides, vitamin C and cucumber extract for firmer and brighter skin around the eyes, and gentle enough for both AM and PM use. I love the twist up nozzle which makes it easier to store and travel with. Available at @sephora!” – @nessasarymakeup #drunkinlove
မနက်တကြိမ်၊ ညတကြိမ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဘယ်လောက်ပဲ Eyecream product သုံးသုံး မထူးခြားပါဘူးဆိုတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ အကြိုက်တွေ့မှာ အမှန်ပါပဲ။ အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ လက်သန်းကြွယ်ကို အသုံးပြုပြီး မျက်ဝန်းတဝိုက် အသာအယာပုတ်ပြီး လိမ်းပေးပါ။ ဒီ EyeCream လေးကို အသုံးပြုပြီးတဲ့အခါ ဗူးကိုအပြင်မှာထားခြင်းထက် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာထည့်ပြီး သိမ်းဆည်းထားသင့်ပါတယ်။
Image Source: www.drunkelephant.com
ဘာလာလာ ဖုံးမယ်ဟေ့ :D :D !